indlela yokuthenga usetyenziso ngaphandle kwekhadi letyala
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ungazithenga njani iiapps ngaphandle kwekhadi letyala
Ungazithenga njani iiapps ngaphandle kwekhadi letyala
Abanye bathi izinto ezintle ebomini zikhululekile, kodwa akusoloko kunjalo xa kuziwa kwiifowuni zokusebenza. Ukuba unamehlo kwi-app ehlawulelweyo, kodwa awufuni ukusebenzisa ikhadi lamatyala, okanye awunalo nje, zeziphi iindlela onokukhetha kuzo? Ewe, kuxhomekeke kwifowuni onayo kwaye uhlala phi.
Ukuba i-smartphone yakho iqhuba i-Android, ke uthenga kwiVenkile yeGoogle Play. E-US, olu lukhetho lwakho olungelulo lwekhadi letyala:
Ukuhlawulwa kwefowuni ephathekayo
Iindleko zokuthenga ezenziwe ngale ndlela ziya kongezwa kwityala lakho lenyanga. Nalu uluhlu lwabaphathi abaxhasa le nkonzo:
Le yindlela ekhawulezayo kwaye elula yokuthenga ii -apps, ngakumbi ukuba uyenza kunqabile kwaye awufuni kubanjiswa ngemali eyongezelelweyo kwibhalansi yakho yeGoogle Play. Ukuba uceba ukuthenga ii -apps okanye ezinye izinto zedijithali, ngokuyintloko usebenzisa le ndlela, jonga kumphathi wakho ukuba kukho umda wenyanga (weVerizon yi- $ 100).
Dlala iKhadi leZipho likaGoogle
Amakhadi ezipho eza nekhowudi oyikhululeyo ukongeza ibhalansi kwiakhawunti yakho kaGoogle. Akunyanzelekanga ukuba uphume uyokufuna ivenkile ukuze uthenge enye, iWalmart, iAmazon kunye nabanye abathengisi bathengisa amakhadi ezipho kuGoogle Play ngokuthumela i-imeyile. Ngaphandle kobunzima bokukhulula ikhowudi, enye into engezantsi kukuba isixa esincinci yi- $ 10, ke ukuba unomdla nje kusetyenziso olunye okanye ezimbini ezingabizi, uya kubanjwa yimali engasetyenziswanga. Kwicala lokudibanisa, ukusebenzisa ikhadi lesipho kubeka umda kwiirhafu ezinokubakho, ke umntwana akanakho ngengozi ukuqokelela ityala elikhulu ngelixa edlala umdlalo ngokuthenga ngaphakathi nohlelo, umzekelo.
Ngaphandle kokuba umntu athumele imali kwiakhawunti yakho ye-PayPal, kuya kufuneka usebenzise ikhredithi okanye ikhadi lebhanki ukunxibelelana nayo, ke luhlobo lokoyisa injongo, ngaphandle kokongeza omnye umaleko wokhuseleko.
Ukuba ungumnini we-iPhone, ekuphela kwendlela yakho yokufumana usetyenziso yiVenkile yeApple yeApple. Ngenxa yezizathu esingazaziyo, eMelika, akukho zithwali zinesivumelwano neApple yokuhlawula ngokuthe ngqo, ke ukhetho lwakho luthintelwe:
Ivenkile yeeVenkile zeKhadi leZipho
Iyafumaneka ukuhanjiswa kwe-imeyile, kunye nakwivenkile yobuchwephesha yendawo yakho okanye Ivenkile enkulu. Umahluko kuphela kukuba kwiVenkile yeApple eyona ndlela inexabiso eliphantsi yi-15 yeedola.
Kwakhona, kuyakufuneka ukongeze imali kwiakhawunti yakho ngezinye iindlela, ukuba uzinikele ekusebenziseni amakhadi etyala.
Ngokubanzi, amakhadi ezipho lolona khetho lufanelekileyo ukuba ufuna ukulawula inkcitho yakho kwaye ufuna ukuba iakhawunti yakho ephathekayo yahlulwe ngokupheleleyo kwizixhobo zemali ozisebenzisayo. Amakhadi ezipho aya kugcina ulwazi malunga nokuthenga kwakho kude nomphathi wakho.
Eyona midlalo ilwayo ye-iphone
Iifowuni ze-iphone 12 pro max
Idili: Kuvulwe i-Samsung Galaxy S6 (T-Mobile, AT & T) ngoku ixabisa i $ 399 kwi-eBay
I-app yeMotion ye-Android ikuvumela ukuba wenze ii-movie zokumisa ezipholileyo kwindawo leyo
Iinkqubo ezilungiselelwe: Iingcebiso zeFacebook Messenger kunye namaqhinga e-iOS nakwi-Android
I-Walmart ityhila ngokuqinisekileyo ezona zintengiso ziLwesihlanu ziMnyama kwi-iPhone XS, XR, iPhone 8, kunye ne-iPhone X
I-Apple iPhone 12 Pro / Max vs iPhone XS / Max
Nantsi into ekufuneka uyixelele iApple ukuba ifumane indawo yokubuyisela simahla kwiPad Pro Pro egobile